Finland oo aqoonsi gaar ah u sameynaysa soo galootiga | Somaliska
Dalka dariska la ah Sweden ee Finland ayaa ka bilaabata bishaan Juun waxa ay kaar aqoonsi oo gaar ah u sameynayaan dadka soo galootiga ah. Dadka u dhashay finland ayaa qaadan doona Kaar buluug ah, halka kuwa soo galootiga ah la siin doono mid Borown ah.
Warbaahinta dalkaas ayaa sheegtay in booliska ay doonayaan in ay fududaato la socotka soo galootiga. Dadka u dhashay Finland ayaa kaarkooda aqoonsiga u isticmaali kara in ay ku safraan gudaha Yurub, halka soo galootigu aysan midaas sameyn karin.
Kaararkii hore ee aqoonsiga ayaa la isticmaalai doonaa ilaa inta ay ka dhacayaan. Arintaan ayaa mucjiso ku noqotay dad badan, iyadoo lays dhihi karo waa cunsuriyad iska cad in dadka sidaa loo kala takooro. Sweden ayaysan ka jirin nidaam nuucaas ah.
Sanadkaan ayaa Finland waxaa doorashadii baarlamaanka guul weyn ka soo hooyay xisbi cunsuri ah oo lagu magacaabo True Finns.
Sopa under Mattan says:
Asc, maahan wax lala yaabo waaye wax u baahan ku cibro qaadasho .
Horayse Soomaalidu u tiri , Fulayga Usha Agtiisa Ku dHUFO , Haddii uu Fahmi Waayana Isaga ku Dhufo,,, waa arin marag ma doontaa .
Xisbiyadaan laguu sheegaa ee tobanka magac kala wada S/ MD ,, VP , SD kulligood waa isku hadaf .
Balse waxay u kala baxaan Dhurwaa kuu aamusan iyo mid kuu sheegtay wuxuu kuu qabo , midakaa kuu sheegtay ayaana la qaataa.
Kuligood Socialka ama Moderaterna waxay ku naawilaan maalin uun in da’yarteenu Diintooda ka tagaan ku milmaana iyaga ;;l Gaal Isagoo Hog Kuu Qodaa Buu Hay Ku dhahayaaye ;;, halka SD ay ku tiri war kubaba Dooni maayee iga bax .
Salaan sare jimcaale marka hore,, waxaanan fahmin soo galootiga loo sameynaayo kaarka brown ka ah ,, ma dad kaarkaas sharciga ku sii sugaayaa mise waaba sharci mana ku safri karaan miyaa , bal ii jilci
cabdikaafi x.cigaal says:
kkk walaahi waa arin dhib keeda leh sweden ayaa lala yaabanaa oo dadka diidee ku takooraaya ayaa yimid xaqiiqdii mar dhaw soomaali irdaha ayaa kasoo xirmaaya kadibna wadankooda ayay nabadaysan doonaan waliba sida qoomiyada yahuuda ayay isku jeclaandoonaan waxaa dhibka u keenay qurba joogta waa qaraabadii oo ay jareen dhaqan diimeedkii oo ay katageen ayna qaateen dhaqamo xun fadlan iska dhaafa qaraaba goosnimada mar ayaa la idin soo raafi doonaa oo aad hoos imaan doontaan dadkii aad goyseene
jimcaale wad mahadsantahay waxan kugu talilaynaa hadaan nahay akhristayash in aad noosoo qortid macluud ku saabsan yurubta le ee aadan ku koobnaa sweden kaliya
ayaan ilwaad says:
somaalida ayada ayaanoqoday moshkilada sababtooydahay ayaka ayaa albaabwalbo iska xiray
Cabdi fitax cigaal waa runtaa